Nhọrọ 5 mgbe oku olu na-abịakwute anyị na WhatsApp | Gam akporosis
Francisco Ruiz | | Ngwa gam akporo, Nkuzi, Whatsapp
Otu n'ime ihe ndị gam akporo ndị ọrụ na-echekarị bụ olu na-akpọ na WhatsApp nke aturu anya ibata na a isi ngwa update tupu oge ọkọchị eruo.
Ka ọ dị ugbu a na ka ichere ahụ abụghị ogologo oge, taa achọrọ m ịweta ụfọdụ ndị ọzọ kachasị mma nke anyi nwere n'ime play Store de Google, na anyị nwere ike ibudata kpamkpam n'efu na nke ahụ ga - enyere anyị aka imezu free oku na gam akporo site na njikọ Wifi anyị ma ọ bụ ọbụna njikọ data data 4G 0 3G anyị.
N'okpuru ebe a, m ga-ahapụrụ gị ụfọdụ n'ime ndị m tụlere n'onwe m ngwa kachasị mma iji mee oku olu ma ọ bụ ọbụna free video oku si anyị Androids. Iji nweta nbudata ha, ihe niile ị ga - eme bụ pịa aha nke ngwa ọ bụla na nke a ga - akpọrọ gị gaa nkọwa sara mbara banyere ya site na ebe anyị ga - ahụ njikọ njikọta nke ga - akpọrọ anyị ozugbo Playlọ Ahịa Google.
Enwere m olileanya na ndụmọdụ ndị a dị gị mma ma na-echere gị mgbe anyị na-enweta mmelite ahụ e kwere ná nkwa, bụ nke a na-enye anyị ohere nhọrọ achọrọ olu na-akpọ na WhatsApp, dịrị ntakịrị mma ma dịkwa ogologo.
1 Tango maka gam akporo
2 Facebook ozi
4 Blackberry ozi maka gam akporo
Tango maka gam akporo
Tango maka gam akporo Maka m ọ bụ nhọrọ kachasị mma anyị nwere maka n'efu na Playlọ Ahịa Google. Ngwa ochie mara ihe niile tara ahụhụ n'ezie Kafka metamorphosis ya na mmelite kachasị ọhụrụ.
Tango maka gam akporo na-enye anyị peculiarity nke a Ot nkata na mgbakwunye nke inwe ike ịrụ free video oku, dokwara free olu na-akpọ ma ọ bụ ọbụna kpọọ minigames na onye ozo anyi site na nhọrọ oku vidiyo n'efu.
Tango - Ihe nkiri vidiyo
Facebook ozi bu ihe omuma ochie nke Android parish nke mmelite ohuru na ngwa a meghariri ihu ya kpamkpam, na-eme ka o nwekwuo oru ma na-agbakwunye nhọrọ ndi mmadu nile mara dika Facebook egosipụta ma obu Chats Isi ma ọ bụ nhọrọ dị ka oku olu anaghị akwụ ụgwọ n'etiti ndị ọrụ ngwa.
Me oku olu dị mfe dị ka imeghe ngwa ma gaa na etiti taabụ ma na-ahọpụta ndị ọrụ nhọrọ Aka. Ozugbo ahụ, a ga-egosi ndepụta nke ndị ọrụ anyị nọ n'oge ahụ, naanị site na ịpị otu n'ime ha nke ejikọrọ na mkpanaka, wee pịa na bọtịnụ menu achọtara n'elu aka nri, a ga-egosi anyị nhọrọ nke Kpọọ oku.
Viber Ọ bụ ihe ọzọ dị ukwuu maka ngwa gam akporo gam akporo na anyị etinyegogo oge ụfọdụ na ọdụ anyị. Dị ka ngwa abụọ ahụ m kọwaara tupu oge a, nke a bụ nhọrọ dị mma iji buru n'uche iji rụọ ọrụ free olu na-akpọ anyị gam akporo.
Na mmelite ikpeazụ a na free ngwa maka gam akporo, ewepu ihu ya ohuru ohuru na ihe ndi ozo nyere ya ihu anya Holo na eso ntuziaka nke Google maka ngwa gam akporo, ha jisiri ike nweta oke nkọwa di elu maka ndi ekwuru n’elu. oku olu anaghị akwụ ụgwọ n'etiti ndị ọrụ ngwa.
Blackberry ozi maka gam akporo
Blackberry ozi maka gam akporo bụ otu n'ime ngwa kachasị ọhụrụ iji mejupụta oku olu efu n'etiti ndị ọrụ nke ngwa ahụ, agbanyeghị na nke a, ha kpọrọ aha ma ọ bụ mee baptizim ọrụ ahụ Olu BBM.
Aghaghị m ịgwa gị na ọ bụ ezie na BBM maka gam akporo na-ewere ọtụtụ dị ka otu n'ime ngwa kacha mma maka ikori ma ọ bụ kwuo okwu na ndị kọntaktị anyị n'efu na ihe gbasara nchekwa ọ nwere ike bụrụ afọ ole na ole tupu ndị asọmpi ya. Mụ onwe m emegharịbeghị ngwa ahụ, ọ bụ ezie na m wụnye ya na gam akporo m, anaghị m eji ya eme ihe.
BBM - Adịkwaghị
Achọrọ m ịla Line n'ihi na ọgwụgwụ, n'ihi na ọ bụ ezie na m na-agbalị otu puku ugboro, Abụghị m onye ọrụ nke ngwa n'ihi ya ezigbo batrị igbapu na interface ya gbagọrọ agbagọ nke na enweghị m ike iji ya.
N'agbanyeghị nke ahụ, achọrọ m itinye ya na post a ebe ọ bụ otu n'ime ya ngwa ozi ngwa na-eburu ọtụtụ ihe nbudata na azụ ya na nke ahụ bụ nkwado dị ukwuu nke ndị ọrụ nke ngwa gam akporo n'efu.
Site Line maka gam akporo anyi nwekwara ike ime oku oku n'etiti ndị ọrụ otu ihe ahụ yana ọrụ ọkpụkpọ vidiyo ọhụụ etinyegoro na ngwa gam akporo n'oge na-adịbeghị anya.
Ọfọn, nke a bụ ndepụta nke aro m ka ọ bụrụ na anyị enweta ndị a tụrụ anya ya olu na-akpọ na WhatsApp, anyị pụrụ ịnụ ụtọ ọrụ a VoIP na-akpọ oku na ụfọdụ n'ime nhọrọ ndị a mara mma nke m gosipụtara ma na-akwado nbudata nke ọtụtụ nde ndị ọrụ gam akporo.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Whatsapp » Ezie na anyị na-enweta oku oku na WhatsApp, ebe a bụ ụfọdụ na-akpali ọzọ
Ebee ka ha si ahapụ Skype? Ha kwesịrị ịgụnye ya.
Zaghachi ka testica
O doro anya na ị kwesịrị ịgụnye Skype na nke ahụ na-adịghị mma nke m nwere ike ghara ịhapụ, ọ bụ ezie na m na-ekwu na post ọ bụ nkwanye onwe onye.
Nwere ohere iji mụta otu esi eji Google Apps Script